नेपाल मात्र होइन, विश्वमै धेरै रक्तदान गर्ने महिलाका रूपमा परिचित हुँदै जानुभएको छ ? कहिलेदेखि रक्तदान गर्दै आउनुभएको छ ?
सुरुमा मैले रक्तदान गरेका बेला नेपालमा रगत दान गर्नुपर्छ भन्ने चलन नै थिएन । पहिला रगत दान गर्ने कुरालाई कानुनी रूपमा खुला गरिएको पनि थिएन । त्यसबेला कति मनिस रगत नपाएरनै मर्ने अवस्था थियो । सुरुमा मैले लुकेर रक्तदान गर्नुपर्ने अवस्था थियो । महिला, त्यसमा पनि माडवारी परिवारमा त रक्तदान गर्ने कल्पना पनि गरिँदैनथ्यो । महिला–पुरुष समान भनिरहेका बेला यस्ता सामाजिक काममा महिला पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
मेरो बुबा समाजसेवी हुनुभएकाले सानै उमेरदेखि रक्तदान गर्ने प्रेरणा मिलेको हो । ममा १४ वर्षको हुँदादेखि नै रक्तदान गरेर कसैको जीवन जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच विकास भइसकेको थियो । यही कारणले पनि समाज र परिवारको स्वीकृतिबिना धेरै पटक रक्तदान गर्दै आइरहेको छु । मलाई समाजसेवालगायत गाडी चलाउने कुरा धेरै मन पर्छ । मैले सुरुमा १४ वर्षको उमेरमा रक्तदान गरेको हुँ । सामान्यतया १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । लामो समयदेखि रक्तदान गर्दै आइरहेको हुनाले यस्ता कार्यक्रममा अझैँ पनि मलाई बोलाउने गरिएको छ । यदि कतै रक्तदान गरिरहेका छन् भने त्यो कार्यक्रममा जाने गरेको छु । मेरो लक्ष्य नै बाँचुन्जेल रक्तदान गर्ने भन्ने छ । मैले रक्तदान मात्र होइन, आँखा दान पनि गरेको छु ।
धेरै वर्षपहिले छतबाट लडेर एक छिमेकी महिलाको वीर अस्पतालमा उपचार गराउँदा–गराउँदै रगत नपाएर मृत्यु भयो । यो घटनाले मलाई रक्तदान गर्ने प्रेरणा मिलेको हो ।
रक्तदान गर्ने प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो ?
धेरै वर्षपहिले छतबाट लडेर एक छिमेकी महिलाको वीर अस्पतालमा उपचार गराउँदा–गराउँदै रगत नपाएर मृत्यु भयो । यो घटनाले मलाई रक्तदान गर्ने प्रेरणा मिलेको हो । त्यसबेला म १४ वर्षकी मात्र थिएँ । त्यसबेला मैले रगत त दान गर्न सकिनँ, तर रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा त्यही बेलादेखि सुरु भएको हो । यदि रक्तदान गर्ने चलन भएको भए ती महिलाको मुत्यु हुने थिएन ।
गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डको आधिकारिक नाम दर्ताका लागि पत्र आएको छ । मैले हालसम्म १ सय ४१ पटक रक्तदान गरिसकेको छु ।
गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा धेरै रक्तदान गर्नेमध्ये तपाईंका नाम आएको हो ?
हो, पहिला रक्तदान गर्नेमध्ये पनि महिला र पुरुष छुट्ट्याउने चलन रहेनछ । अब भने धेरै रक्तदान गर्ने महिलामा मेरो नाम आउने भएको छ । गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डको आधिकारिक नाम दर्ताका लागि पत्र आएको छ । मैले हालसम्म १ सय ४१ पटक रक्तदान गरिसकेको छु । मैले धेरैजसो ब्लडबैंक तथा रक्तदान कार्यक्रममा रगत दान गरेको छु । पछि त रगत अभाव हुने बिरामीका आफन्तले नै फोन गरेर पनि रगत माग्ने गरेका छन् । त्यो बेला मैले दिन सक्ने अवस्था भए आफै गएर दिने र दिन नसक्ने अवस्था भए खोजेर पनि उपलब्ध गराई सहयोग गर्दै आइरहेको छु । रगत दान गर्ने त अहिले मेरो जीवनी बनिसकेको छ । भूकम्पले गर्दा मैले गरेका कतिपय रत्तदानका प्रमाणपत्रसमेत हराइसकेका छन् ।
रक्तदानका विषयमा भविष्यमा के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
यति लामो समय त रक्तदान गरेर बिताएँ भने अब नमरेसम्म र दिन मिल्ने अवस्था भएसम्म रक्तदान नै गर्ने योजना छ । रक्तदानका साथै रगत अभाव भएर भौंतारिएका बिरामीका परिवार तथा आफन्तलाई थाहा भएसम्म रगतको व्यवस्था गरिदिने लक्ष्य लिएको छु । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको धर्म हो । म मरेर गए पनि मेरो रक्तदानले जीवन पाएकाहरूले सम्झनेछन् भन्ने लागेको छ ।
पुरस्कार र सम्मानभन्दा पनि यसलाई समाजसेवाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर, रक्तदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम भने सरकारले नै ल्याउनुपर्छ ।
सम्मान र सम्झना आफ्नै ठाउँमा छन् । जसले बुझेको छ, उसले सम्मान गरिरहेका छन् । राजाको पालामा गोर्खा दक्षिणबाहु पुरस्कार पाएँ भने अखिल नेपाल भारतीय समाजले पनि नवरक्त पुरस्कार दिइसकेको छ । रक्तदान गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुरस्कार र सम्मानभन्दा पनि यसलाई समाजसेवाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर, रक्तदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम भने सरकारले नै ल्याउनुपर्छ ।
रगत नियमित दान गर्नुभयो, अनुभव नै हुने गरी यसको फाइदा के–के रहेछन् ?
मलाई पहिला धेरै डन्डिफोर आउँथ्यो, तर नियमित रक्तदान गरेपछि यो सबै हराएर गयो । पछि मलाई आआफै महसुस भयो कि नियमित रक्तदान गर्नुपर्ने रहेछ । अर्को फाइला भनेको दान हो । दान गर्दा धर्म हुन्छ, त्यसबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु पनि भावनात्मक फाइदा नै हो । कसैको जीवन बच्नु नै सबै भन्दा ठूलो कुरा हो । पहिला–पहिला त म रक्तदान गर्न सोध्दै जाने गरेको थिएँ । नियमित रक्तदान गरे रोग पनि नलाग्ने अनुभव गरेको छु । निरोगी बन्न रक्तदानले सहयोग गर्छ ।